Xildhibaan Mukhtaar Tuurre “Waan ku fashilanay shaqadii ay noo wakiisheen Shacabka Hirshabeelle” – Kalfadhi
Xildhibaan Mukhtaar Tuurre “Waan ku fashilanay shaqadii ay noo wakiisheen Shacabka Hirshabeelle”
June 8, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Mukhtaar Tuurre oo katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle islamarkaana wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in Golaha Wakiilada ee maamulkaasi gabeen mas’uuliyadii loo idmaday ee Hirshabeelle.
Kulankii ugu dambeeyay ee Golaha Wakiilada Hirshabeelle ayaa la qabtay 23-kii bishii 2aad ee sanadkaan 2019 sida uu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Mukhtaar Tuurre.
Mukhtaar Tuurre ayaa sidoo kale sheegay in aysan maalinna kulmin Guddiyada Baarlamaanka hadii uu dhici waayay kulankii guud ee Golaha Wakiilada Hirshabeelle. Arintaas waxa uu ku tilmaamay mas’uuliyad darro wayn oo ay sameeyaan xubnaha Baarlamaanka.
“Baarlamaanka fasax kuma jiro mana kulmaan xataa guddiyada ma kulmaan, waa mas’uuliyad darro wayn ay ku dhaqaaqeyn guddoonka iyo Baarlamaanka” ayuu yiri Xildhibaan Mukhtaar Tuurre oo katirsan Golaha Wakiilada ee Hirshabeelle.
“Haddii ay fariisan waayeen Xildhibaanada daruuf kastaba, ma ahan in la fasaxo guddiyada waxaan shacabka Hirshabeelle u sheegayaa in Wakiiladu ku fashilmeen mas’uuliyadii aad u dhiibateyn” ayuu yiri Mukhtaar Tuurre oo ah Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku xigeenadiisa ayuu ku eedeeyay in uusan qabsoomin fadhiyada Baarlamaanka waxa uuna Xildhibaanada kale ugu baaqay in ay yeeshaan fadhi deg deg ah islamarkaana ay doortaan guddoon cusub oo hogaamiya Golaha Wakiilada Hirshabeelle.
“Dastuurka waxa uu dhigayaa hadii la waayo ama ay soo xaadir waayaan fadhiyada baarlamaanka 3-da guddoon in Baarlamaanka in Golahu doortaan guddoomiye KMG ah” ayuu yiri Xildhibaan Mukhtaar Tuurre.
Kulankii ugu dambeeyay ee Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhacay 23-kii bishii 2aad ee sanadkaan mana jirto wixii markaas ka dambeeyay kulan kale oo ay yeesheen Xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle.
Xildhibaan Cabdi Saabir “Waxaan dalbanayaa in si dhab ah loo baaro Kiiska G/dhexe Cabdi Cali Seed”